Wararka Maanta: Arbaco, Jan 20, 2021-Guddiga Arrimaha Dibada Baarlamaanka Soomaaliya oo qoraal u diray madaxweyne Farmaajo
Qoraalka loo diray madaxweynaha ayaa looga dalbaday inu u cadeeyo ciidamada tobabarka loo geeyay dalka Eritrea iyo xiliga ay ku soo laabanayaan dalka, maadama eheladii dhalinyaradaas ay muujinayaan walaac ku aadan xaaladooda caafimaad.
Warka ku saabsan ciidamada Soomaaliyeed ee ka qeybqaatay dagaalkii dhaxmaray ciidanka Difaaca Itoobiya iyo Tigrayga ayaa hadal heyn badan ka dhax abuurtay bulshada Soomaaliyeed, waxaana warka arintan ku saabsan la oran karaa waa qoddobka ugu weyn ee xiligan saameynta ku leh siyaasada dalka marka laga soo tago doorashada.
Qoraalka ayaa lagu codsaday in guddi xaqiiqo raadin ah loo diro dalka Eritrea si ay u xaqiijiyaan nolosha askartaas, kuwaasi oo ka kooban xubno dowladda federaalka iyo Golaha shacabka.
Qoraalka ayaa imanaya xili sidoo kale midowga musharixiinta ka dalbadeen madaxweyne Farmaajo in uu faah faahin rasmi ah ka bixiyo warka ku saabsan gaarida dhalinyarrada Soomaaliyeed iyo dareenka ay qabaan waalidiin badan oo arintan ka walwalsan.
Hoos ka akhriso Qoraalka ka soo baxay Guddiga